Eyona Coconut Coast Condo
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguJennifer
Indawo yaseMbindi Mpuma, ebekwe kakuhle kwigumbi elinye lokulala, umgama wokuhamba ukuya kwindawo yeMarike yeCoconut kwintliziyo yeKapa's Coconut Coast. Le ndawo ikunika lula ukuba kufutshane noLwandlekazi, edolophini yeKapa'a, kunye nokuqhuba ngokulinganayo kwiiNdawo eziMantla, emazantsi naseNtshona eKaua'i. Isithuba esihle ukuba ungumhloli! Imihlaba ichumile ngeplumeria kunye nemithi yeentyatyambo zeginger kunye nokuhamba ngokulula ukubona ukuphuma kwelanga phezu koLwandlekazi lwePasifiki.
Super elula kuMbindi-mpuma Indawo yecala. Hamba uye kwiMarike yeCoconut kunye noLwandle, kunye ne, iLongs Drug, iSafeway kunye neStarbucks. I-Waipouli-Wailua, iKapa, i-midway point ukuqhuba i-North Shore okanye i-South Shore kunye ne-West Side yesiqithi. Imizuzu eli-15 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya.
Ndiyavuya ukuphendula yonke imibuzo ukunceda ukonwabela utyelelo lwakho
Inombolo yomthetho: 443217100
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kapaʻa